ဒေါင်းဇာနည် | ဖက်ဆစ် အာဏာရှင်စနစ် ကမ္ဘာတွင် မရှိစေရ။
Filed under: ကြေညာချက် — Leaveacomment
ကျွန်တော် ယခုချိန်ကစပြီး www.daung-zarni.iblogger.org တွင် ပြောင်းရွှေ့ရေးသားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
အစက daungzarni.wordpress.com ကို သတင်းဆိုင်ရာ ဘလော့ဂ်အဖြစ်ရည်ရွယ်ပြီး ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တင်ထားသမျှ ပို့စ်တိုင်းဟာ ကော်ပီ၊ပေ့စ် ပို့စ်တွေသာ ဖြစ်နေတာမို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် လိပ်ပြာမလုံ ဖြစ်ရပါတယ်။ တကယ် သတင်းဘလော့ဂ် တည်ဆောက်တော့မယ် ဆိုရင် (၁) ပြည်တွင်း အမာခံသတင်းပေးပို့သူ(ကိုယ်ကျိုးစွန့်သူ) လူခံတွေရှိဖို့ အခြေခံအားဖြင့်လိုအပ်ပါတယ်။ (၂) သူများဆီမှ တဆင့်ကူးယူခြင်းဟာ သတင်းဖြန့်ဝေခြင်းဆိုတာထက် သူများ ဦးနှောက်ဖောက်စားတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ခံစားလာရပါတယ်။ (၃) သူများဆီမှ ကူးယူခြင်းဟာ မိမိရဲ့စိုက်ထုတ်အား လုံးဝ(လုံးဝ) မပါတဲ့ အတွက်ကြောင့် သတင်းသမားတစ်ယောက်ရဲ့ အခြေခံကိုတောင် ပိုင်နိုင်ခြင်း မရှိတဲ့သူ အရည်အချင်းမရှိတဲ့ ဘလော့ဂ်ဂါ တစ်ယောက်အဖြစ် မြင်လာပါတယ်။
အထက်ပါ အကြောင်းအရာတွေကြောင့် ကျွန်တော် အိမ်ပြောင်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်သစ်မှာ ကျွန်တော့ ကိုယ်ပိုင် ယုံကြည်ချက်များ၊ အတွေ့အကြုံများ၊ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ ကို အချိန်ပေးရေးသားသွားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပါတယ်။ သတင်းများကိုလည်း Distributor အနေနဲ့သာ www.daung-zarni.blogspot.com (blogger) မှတဆင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဆက်လက်ကူးယူတင်ဆက်သွားပါမယ်။ ကျွန်တော့ရဲ့အိမ်သစ်ကိုလာလည်ပြီး ကျွန်တော့ရဲ့အတွေးအမြင်တွေ ၊ အတွေ့အကြုံတွေကို မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အတွေးအခေါ်၊ အယူအဆ၊ အတွေ့အကြုံတွေ နဲ့လာရောက် ဖလှယ်လှည့်ပါ…ကျွန်တော် ဒေါင်းဇာနည် မှ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုပါကြောင်းကို သတင်းပါးပါရစေ…………………………………………………..။
Filed under: စစ်ရေးသတင်း, ပြည်တွင်းသတင်း — Leaveacomment
၂၀၀၂ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလတွင် မြန်မာစစ်အစိုးရက “ငြိမ်းချမ်းသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အသုံးချရေး အတွက်” အဏုမြူ သုတေသနဓာတ်ပေါင်းဖို တခုတည် ဆောက်ရန် အစီအစဉ်ကို အတည်ပြုပြောဆိုလာခဲ့သည်။ ထိုအချိန် က နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒု-၀န်ကြီး ဦးခင်မောင်ဝင်းက “မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဏုမြူစွမ်းအင်အပေါ် ငြိမ်းချမ်းသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စိတ်ဝင်စားမှုမှာ ကာလကြာရှည်ကတည်းက ရှိနေခဲ့သည်” ဟု ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။
မြောက်ကိုရီးယား နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့၏ ဆက်ဆံရေးအပေါ် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
Filed under: ပြည်တွင်းသတင်း, နျူကလီးယားသတင်း — Leaveacomment
(Eleven Media Group မှစာသားများကူးယူ၍ ဟံသာဝတီမှ ဗီဒီယိုအားကူးယူဖော်ပြသည်)
ရန်ကုန်တွင် လျှပ်စစ်မီး ရချိန်နည်းပါးသဖြင့် မိုဘိုင်းဖုန်းလိုင်းများ ခေါ်ဆိုရခက်
ဇွန် ၁၁၊ ရန်ကုန်
ရန်ကုန်မြို့တွင် လျှပ်စစ်မီး ရရှိချိန် ပိုမိုနည်းပါးလာ သဖြင့် မိုဘိုင်းဖုန်း ကွန်ရက်နှင့် ပတ်သက်သည့် ထပ်ဆင့်လွှင့်ထုတ်သည့် နေရာများအား အချိန်ပြည့် ဖွင့်မထားနိုင်သည့် အဖြစ်နှင့် ကြုံတွေ့နေရပြီး မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးစွဲသူများ အခက်အခဲကြုံနေရသည်။ မိုဘိုင်းဖုန်း ကွန်ရက်တွင် ထပ်ဆင့်လွှင့်ထုတ်ပေးသည့်တိုင် များအား အချိန်ပြည့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးထား ရန်အတွက် လောင်စာဆီမလုံလောက် တော့သည်အဖြစ်ကို လတ်တလော ကြုံတွေ့နေရသည်ဟု မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး အင်ဂျင်နီယာ တဦးက ပြောသည်။
“အရင်ကာလတွေက မီးလာချိန်များသေးပြီး မီးပျက်ချိန်မှာ မီးစက်နှိုးထားဖို့ လောင်စာဆီလုံလောက်ပေမယ့် အခုသီတင်းပတ်တွေမှာ မီးပျက်ချိန်များလွန်းတော့ လောင်စာဆီမလောက်တဲ့ အခါ ပိတ်ထားရတော့တယ်။ အဲဒါကြောင့် ကွန်ရက်တခုလုံး မမိတာ ၊ ဆက်သွယ်ရခက်ခဲတာ ၊ ဂျီအက်စ်အမ်ဆို မက်ဆေ့ခ်ျ ပို့ရခက်ခဲတာတွေ နဲ့ကြုံနေရတာပါ။ အခုရက်ပိုင်းမှာ ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီး ဦးသိန်းဇော်( ယခင်ဗိုလ်မှူးချုပ် ) လာတော့ အဲဒီအခြေအနေကို တင်ပြပါတယ်။ ၀န်ကြီးက မီးမလာလို့ စက်တွေ အချိန်ပြည့်မလည်နိုင်တာတော့ မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ပြောတယ်၊ ဒါပေမယ့်လည်း လောင်စာဆီ ထပ်တိုးပေးဖို့လည်း မရှိတော့ ကျွန်တော်တို့ ၀န်ထမ်းတွေအနေနဲ့ ဘာမှ မတတ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေပါ´´
ဟု အထက်ပါ အင်ဂျင်နီယာ ကပြောဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် အရှေ့တောင်အာရှတွင် မိုဘိုင်းဖုန်း လိုင်းတစ်လိုင်းဈေးနှုန်း အမြင့်ဆုံး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည့်အပြင် တစ်မိနစ် ပြောဆိုခတွင်လည်း အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံထက် နှစ်ဆနီးပါးများနေပြီး ၀န်ဆောင်မှုပိုင်းတွင်မူ အနိမ့်ဆုံး အနေအထားမျိုး နှင့်ကြုံတွေ့နေရသည်။
ရန်ကုန်မြို့မှ မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးစွဲသူများ အနေဖြင့် လိုင်းမ၀င်ခြင်း၊ `ကွန်နက်ရှင် အယ်ရာ´ဖြစ်ခြင်း၊ မက်ဆေ့ခ်ျ ပို့ရခက်ခြဲ့ခင်း၊ အစရှိသည့် ပြဿနာများနှင့် အစဉ် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပြီး အခြားနိုင်ငံများကဲ့သို့ အခြားရွေးချယ်စရာ မိုဘိုင်းဖုန်း ကုမ္ပဏီမရှိသဖြင့် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ ချပေးသည့် ဖုန်းများကိုသာ ဈေးကြီးပေးဝယ် သုံးစွဲနေကြရသည်။
မတ်လကုန် ဧပြီလဆန်းမှ စတင်ပြီး အခြေအနေဆိုးနေသည့် ရန်ကုန်မြို့လျှပ်စစ်မီး ရရှိမှုသည် ယခုရက်များထိ ဆက်လည် ဖြစ်ပေါ်နေဆဲဖြစ်ပြီး ယနေ့သတင်းစာတွင် ရတနာ သဘာဝဓါတ်ငွေ့တွင်းမှ ရန်ကုန်သို့ သွယ်တန်းသည့် ၂၄ လက်မ ဓါတ်ငွေ့ပိုက်မှ ဓါတ်ငွေ့ကို ၉ရက်နေ့တွင် စတင်ပို့လွှတ်ပြီဟု မျက်နှာဖုံးတွင် ဖေါ်ပြထားသော်လည်း လျှပ်စစ်မီး အခြေအနေမှ တိုးတက်လာခြင်း မရှိသေးပေ။
ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေး တာဘိုင်စက်များ လည်ပတ်ရန် ညောင်တုန်း ရေနံမြေ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ တနင်္သာရီတိုင်း ရေဖြူ ဘက်မှလာသည့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့နှင့် ယခုနောက်ဆုံး မုတ္တမ ပင်လယ်ကွေ့ ရတနာ ဓါတ်ငွေ့တွင်းမှ ဓါတ်ငွေ့များ ပို့လွှတ်ရန် ပိုက်သွယ်တန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်မှာ ပုဂ္ဂလိက ဓါတ်ဆီဆိုင် စတင်ရောင်းပြီ
နအဖ အစိုးရ၏ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပြုလုပ်ရေး စီမံကိန်း တစိတ်တဒေသ ဖြစ်သည့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် လောင်စာဆီဆိုင်များ ရန်ကုန်တွင် ယနေ့ စတင်ရောင်းချသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ယခုနှစ်ဆန်းမှ စတင်ပြီး အစိုးရပိုင် ဓါတ်ဆီဆိုင် ၂၄၆ ဆိုင်ကို ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပြုလုပ်ရန် အဆိုပြုလွှာများ ခေါ်ယူခဲ့ပြီးနောက် မေလ ၁၅ရက်နေ့တွင် လွှဲပြောင်းမည်ဟု ဆိုသော်လည်း ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဓါတ်ဆီဆိုင်များအား ယနေ့တွင်မှ အမှန်တကယ် လွှဲပြောင်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။
သင်္ကြန်မတိုင်မီနှင့် သင်္ကြန်ပြီးနောက် နယ်မြို့အချို့တွင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ဓါတ်ဆီဆိုင်များ ရောင်းချခွင့်ပြုခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရသော်လည်း ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဓါတ်ဆီဆိုင်များကိုမူ ယနေ့မှ စတင်ရောင်းချစေခြင်း ဖြစ်သည်။
“ခါတိုင်း ကိုယ်ထုတ်နေကျ ဆိုင်ကိုဒီနေ့ ဓါတ်ဆီသွားထုတ်တော့ ဆီစာအုပ်မလိုတော့ပဲ တဂါလံ ၂၅၀၀ ကျပ်နဲ့ ကြိုက်သလောက်ထည့်တဲ့၊ ဆီစာအုပ်ကို ဘာလုပ်ရမှာလဲလို့ ဆိုတော့ အမှတ်တရ သိမ်းထားလိုက်ပါလို့ ဆိုင်ကပြောလိုက်တယ်၊ နောက် ကားလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးတော့ လိုဦးမှာလား မသိဘူး´´
“ဒီနေ့ ပုဂ္ဂလိကဆိုင်မှာ ဆီသွားဖြည့်တော့ ပန့်ကိုင်တဲ့သူတွေက မိန်းကလေးငယ်တွေ ဖြစ်နေတယ်။ တခါမှ မိန်းကလေးတွေ ပန့်မကိုင်ဘူးသေးတော့ ထူးဆန်းနေတာ၊ ဆိုင်ဆိုင်းဘုတ်တွေလည်း ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီနာမည်တွေတပ်ထားတယ်။ ဆေးရောင်တွေလည်း ပြောင်းသုတ်ထားပြီ။ အပြင်မှာ ရောင်းနေတဲ့ ဓါတ်ဆီဈေးက တစ်ဂါလံ ၂၈၀၀ ကျပ်၊ အခု ပန့်မှာက ၂၅၀၀ ကျပ်၊ အပြင်ထက်သက်သာတယ်။ ဂါလံ အချင်အတွယ် ပြည့်မပြည့်တော့ မသိသေးဘူး။ အရင်အစိုးရဆိုင်လို အချင်အတွယ် ခိုးမယ်ဆိုရင်တော့ ဈေးနှုန်းသက်သာတာ အလကားဖြစ်မှာပဲ´´
ဓါတ်ဆီဆိုင် ၀န်ထမ်းဟောင်း တဦးက
“စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌါနက နကိုဝန်ထမ်းတွေက လာမယ့် ၃လ ကြာပုဂ္ဂလိကပိုင်ဖြစ်သွားတဲ့ ဆိုင်တွေမှာ ဆက်လုပ်လို့ရသေးတယ်။ နကိုလစာအတိုင်း လုပ်သွားပြီး အဲဒီနောက်မှာတော့ စွမ်းအင်ဝန်ကြီး ဌါနက အခြားဌါနခွဲတွေမှာ ၀င်လုပ်ချင်ရင် ပြောင်းရွှေ့ပေးမယ့်သဘောလို့ သိရတယ်´´
အာဏာသိမ်း တော်လှန်ရေး ကောင်စီ အစိုးရက ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းများအား ပြည်သူပိုင်သိမ်းပြီး နောက်ပိုင်း လောင်စာဆီ တင်သွင်း ဖြန့်ဖြူးခြင်းကို အစိုးရသာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့် လုပ်ငန်းအဖြစ်သတ်မှတ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ရာ ၄၇ နှစ်အကြာ မှ ပုဂ္ဂလိကပိုင် အဖြစ်တရားဝင် ပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့် ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယခုလို တရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်မပြုမီ ဆယ်စုနှစ်များစွာ မှောင်ခို ဈေးကွက်ဟုခေါ်ဆိုသည့် ပြင်ပဈေးကွက် တွင်ကျယ်စွာ တည်ရှိနေခဲ့ပြီး အချို့သောကာလများတွင် ယာဉ်ပိုင်ရှင်များက အစိုးရထံမှ ရရှိသည့် ခွဲတမ်းအား ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းဖြင့် အကျိုးအမြတ် ရရှိခဲ့ကြသည်။
ယမန်နေ့ကထိ ဒီဇယ်ဆီတစ်ဂါလံလျင် အစိုးရဈေး ၃၀၀၀ ကျပ်ရှိပြီး ပုဂ္ဂလိကပိုင် ဖြစ်ပြီးနောက်တွင် ဈေးကွက်ပေါက်ဈေး အတိုင်း နှုန်းရှင်ဖြင့် ရောင်းချသွားမည့် သဘောဟုလည်း သိရှိရသည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်တွင် ဓါတ်ဆီနှင့် ဒီဇယ်ဆီဈေးနှုန်းများကို ၂၅၀၀ ကျပ်နှင့် ၃၀၀၀ ကျပ်သို့ အသီးသီး တိုးမြှင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးနောက် မင်းကိုနိုင် ဦးဆောင်သည့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ အုပ်စုက လောင်စာဆီ ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေး ကြွေးကြော်ကာ လမ်းလျှောက်သည် လှုပ်ရှားမှုကို စတင်လှုပ်ရှားခဲ့သည်။ ထိုသို့လှုပ်ရှားပြီး မကြာမီပင် နအဖ အစိုးရက ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ကာ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ရွှေဝါရောင် သံဃာ့အရေး အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
(ဓာတ်ပုံများ၊ အင်တာနက် – မြန်မာဓာတ်ဆီဆိုင်၏ ပန့်များ၊ ရန်ကုန်လမ်းမများပေါ်က လမ်းဘေးဓာတ်ဆီရောင်းသူများ၏ ဆိုင်)
မီးသတ် ပညာရပ်များကို သင်ကြား ပို့ချမည့် မီးသတ် နည်းပညာ ကောလိပ် ကို ရန်ကုန်မြို့၊ စမ်းချောင်း မြို့နယ်တွင် မကြာမီ ဖွင့်လှစ်ရန် မီးသတ်ဦးစီးဌာန ရုံးချုပ်က စီစဉ်လျက် ရှိသည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်း မီးသတ် ဦးစီးဌာန တိုင်းဦးစီးမှူး ဦးသင်းဌေးရွှေက ပြောသည်။ “မီးသတ် နည်းပညာ တွေကို ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် သိရှိ လာအောင် ဆောင်ရွက်တဲ့ အနေနဲ့ မီးသတ် နည်းပညာ ကောလိပ်ကို ဖွင့်လှစ်ဖို့ စီစဉ်နေ ပါတယ်။ ၁၀ တန်းအောင် ကျောင်းသား တွေကို လက်ခံ မှာပါ ”ဟု ၄င်းက ပြောသည်။ စမ်းချောင်း မြို့နယ်၊ မြေနီကုန်းရှိ မစိုးရိမ် ကျောင်းတိုက် အနီးတွင် ကောလိပ် အဆောက် အအုံကို တည်ဆောက်လျက်ရှိပြီး ဖွင့်လှစ်မည့် ရက်ကို မသတ်မှတ် ရသေးကြောင်း ဦးသင်းဌေးရွှေက ပြောသည်။ “လာမယ့် ၁၀ တန်းအောင်တွေ ကနေ စပြီး လက်ခံ နိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်း ပါတယ်။ ဒီပလိုမာ ပေးမှာပါ။ ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန စတဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီး ဌာန တွေနဲ့ ညှိနှိုင်းဆဲ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဖွင့်လှစ်မယ့် အချိန် အတိ အကျကို မပြောနိုင် သေးပါဘူး ”ဟု ဦးသင်းဌေးရွှေ က ပြောသည်။
ကျောင်းသား လက်ခံမည့် ပုံစံ၊ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း စသည့် ကိစ္စ ရပ်များကို စီစဉ် နေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းက ပြောသည်။ “မီးသတ် ပညာတွေကို လူတွေက အထင် သေးတယ်။ မီးသတ် ပညာဟာ အင်ဂျင်နီယာ ပညာရပ်တွေ ကိုလည်း သိရတယ်။ လက်သမား ပညာရပ်တွေကိုလည်း သိရတယ်။ ဓာတု ပစ္စည်းတွေ အကြောင်း၊ စက် ယန္တရားတွေ အကြောင်း၊ မီးငြှိမ်းသတ်နည်း မှာလည်း လျှပ်စစ်ကြောင့် လောင်တဲ့မီး၊ သစ်သား၊ ဝါး စတဲ့ ကာဗွန်ဒြပ်ပေါင်း တွေကို လောင်တဲ့ မီး၊ သတ္တုကို လောင်တဲ့မီး စတဲ့ လောင်စာ အလိုက ငြှိမ်းသတ် နည်းလမ်းတွေ ရှိပြီး ဖြစ်တယ် ”ဟု ၄င်းကေ ပြာသည်။ မီးသတ် နည်းပညာ ကောလိပ်မှ ဒီပလိုမာ ရရှိသူများ သည် မြန်မာနိုင်ငံ မီးသတ်ဦးစီးဌာန အောက်ရှိ မီးသတ် စခန်းများတွင် ရာထူး အဆင့်ဆင့် မီးသတ် သမားများ အဖြစ် လည်းကောင်း၊ မီးသတ် ပညာ ဖြန့်ဖြူးရေး ဝန်ထမ်းများ အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ဟိုတယ်များ၊ ကုမ္ပဏီများ၊ အဖွဲ့အစည်း များတွင် မီးသတ် အကြံပေးများ အဖြစ် လည်းကောင်း အလုပ် အကိုင် ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဦးသင်းဌေးရွှေက ပြောကြားကြောင်း မြန်မာတိုင်း(မ်) ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထား ပါသည်။
၁၁ . ၆ . ၂၀၁၀
မုတ္တမကမ်းလွန်မှ ဓါတ်ငွေ့များ ရန်ကုန်သို့ ၂၄ လက်မ ပိုက်ဖြင့် ပို့
မြန်မာနိုင်ငံ မုတ္တမ ကမ်းလွန်ရှိ ရတနာ ဓါတ်ငွေ့ ထုတ်လုပ်ရေး စီမံကိန်းမှ ဓါတ်ငွေ့များကို ရန်ကုန်မြို့သို့ ၂၄ လက်မ ပိုက်သစ်ကြီး အသုံးပြုလျက် ပို့ဆောင်နေပြီဟု သိရှိရပါသည်။ ယင်းသို့ ပို့ဆောင်ခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ် ဓါတ်အား ပြတ်တောက်မှု လျော့ကျသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယင်း ပိတ်လိုင်းမှ တစ်နေ့လျှင် ဓါတ်ငွေ့ ကုဗပေ သန်း ၁၅၀ ပို့လွှတ်မည် ဖြစ်ပြီး ရတနာ ဓါတ်ငွေ့ ထုတ်လုပ်ရေးမှ ဖိအား ၁၄၀၀ ပီအက်စ်အိုင်ဖြင့် ပို့လွှတ် လိုက်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ရေး စခန်းဖြစ်သော ဖျာပုံခရိုင် ဒေါ်ငြိမ်း ကျေးရွာရှိ ပိုက်လိုင်း စင်တာမှ ဖိအား ၈၀၀ ပီအက်စ်အိုင်ဖြင့် အင်းစိန်ရွာမ ဓါတ်ငွေ့ ဖြန့်ဖြူးရေး စခန်းသို့ ထိန်းချုပ် ပို့လွှတ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ယင်း ပိုက်လိုင်းမှာ ကုန်းတွင်းပိုင်းတွင် ၁၃၆ ကီလိုမီတာ ရှည်လျားပြီး ပင်လယ်ကြမ်းပြင် ရေအောက်တွင် ၁၅၁ ကီလိုမီတာ ရှည်လျားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင် ရတနာ ဓါတ်ငွေ့ ထုတ်လုပ်ရေးမှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ဖြန့်ဖြူးရေး စက်ရုံများသို့ ပို့လွှတ်နေသော ဓါတ်ငွေ့ ပိုက်အဟောင်းမှာ ယိုစိမ့် ခဲ့သည့်အတွက် ဓါတ်အားများ လျော့ကျ ပြတ်တောက် ခဲ့ရပါသည်။
မေလ အလယ်လောက်တွင် လူနေအိမ်များကို ဓါတ်အား ပေးနိုင်ရေး အတွက် အိမ်တွင်း စက်မှု လုပ်ငန်းများကို ယာယီ လျှပ်စစ် ဖြတ်တောက်ခြင်းများ ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။ ယင်းယာယီ ဖြတ်တောက် ထားမှုများကို လွန်ခဲ့သော အပတ်က စက်မှုဇုံ များမှလွဲလျှင် ပြန်လည် တပ်ဆင်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် ဓါတ်ငွေ့နှင့် ရေအားလျှပ်စစ်မှ လျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်မှု မာဂါဝပ် ၆၆၀ ရှိပြီး ယင်း၏ ထက်ဝက် ဖြစ်သော ၃၃၀ မီဂါဝပ်ကို ရန်ကုန်မြို့တွင် ဖြန့်ဖြူး ပေးလျက် ရှိပါသည်။ သို့သော် ရန်ကုန်မြို့၏ လျှပ်စစ် လိုအပ်ချက်မှာ ၆၆၀ မီဂါဝပ် ဖြစ်သဖြင့် လျှပ်စစ် ဓါတ်အား ပြတ်တောက် လျော့ကျမှုများ ရှိနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ဖော်ပြချက် များအရ သိရှိရပါသည်။